पर्यटन « Sajilokhabar
पर्यटन क्षेत्रको सुधार गर्न सङ्घीय संसद् तयारः सभामुख महरा
काठमाडौँ, १ माघ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा आवश्यक कानूनी सुधारका लागि आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् । नेपाल एशोसियशन अफ टुर्र एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)को ५२औँ
दमौली, २३ भदौ तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि तनहुँ पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव एवं बन्दीपुर भेटघाट शुरु भएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका, बन्दीपुर युनेस्को क्लब, रोट¥याक्ट क्लब अफ दमौली र
मुख्यमन्त्री राईद्वारा मोटरबोट उद्घाटन
इटहरी, १२ साउन । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तालतलैया क्षेत्रलाई यस प्रदेशकै महत्वपूर्ण पर्यटक आवागमन केन्द्रका रुपमा विकास गरिने बताएका छन् । उनले तालतलैया क्षेत्रलाई अझ ब्यवस्थित,
नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको दैनिक खर्च ५३ डलरमात्र
काठमाडौं, असार २७ । नेपाल आएका विदेशी पर्यटकले दैनिक खर्च कति गर्छन् ? पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाले पेश गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विदेशीको दैनिक खर्च औसतमा ५३ अमेरिकी डलरमात्र छ
एक वर्ष पछि धकेलियो : गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
काठमाडौं, असार २३ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय एक वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन कम्पनीको समय सरकारले एक वर्ष
निकुञ्जमा जिप सफारी बन्द
चितवन, २१ असार । वर्षायाम शुरु भएसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जिप सफारी बन्द गरिएको छ । वर्षात मा पानी बढी हुने, रुख ढल्ने, बाटोसमेत चिप्लो हुने, घाँस पनि बढ्ने एवं
हावाहुरी सहितको वर्षाले फेवातालमा एकैपटक आधा दर्जन प्याराग्लाईडिङ खसे, डुंगा पल्टियो
पोखरा, जेठ २७ । पोखरामा आइतबार दिउँसो आएको हावाहुरी सहितको वर्षाले प्याराग्लाईडिङ फेवातालमा खसेको छ । तालमा ३ वटा, नजिकै मालेपाटनमा २ वटा र मेथलाङको डाँडामा एउटा, बाराहीघाट नजिक एउटा
हिमाल चढ्न प्रयोग हुने अक्सिजन नै गुणस्तरहीन
काठमाडौं, जेठ २६ । उच्च हिमाली क्षेत्रको आरोहण यसै पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि आरोहणमा जाँदा प्रयोग गरिने अक्सिजन गुणस्तरहीन भइदियो भने अवस्था कस्तो होला ? तर यहाँ भइरहेको छ
पर्यटन विकासमा होटलको महत्वः मन्त्री अधिकारी
काठमाडौँ, १७ जेठ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने होटलको महत्व रहेको बताएका छन् । पर्यटकीयस्थल ठमेलमा
भद्रपुर विमानस्थलमा आइएफआर प्रविधिबाट जहाज उडान र अवतरण हुँदै
बिर्तामोड, जेठ १० । झापाको भद्रपुर विमानस्थलमा असार पहिलो साता देखि आइएफआर प्रविधिबाट जहाज उडान र अवतरण हुने भएको छ । आईएफआर प्रविधि जाडनको कार्य सम्पन्न भएकाले असार २ गतेबाट यो